USavita Bhabhi: Ikhomikhi Ethandwa Kakhulu Neyimpikiswano ENdiya | Ukuhamba kwe-Absolut
USavita Bhabhi: I-Comic Strip Ethandwa Kakhulu NaseNdiya
Ngithanda ukufunda amahlaya futhi luhlobo lobuciko olungenamingcele ngempela. Kungenzeka ukuthi amahlaya afana ne-United States, i-Europe noma i-Japan, kepha iqiniso ukuthi, ngokwesibonelo, kukhona namahlaya e-India futhi omunye wamahlaya athandwa kakhulu USavita Bhabhi.
Yilokho okubizwa ngakho Amahlaya aseNdiya athandwa kakhulu futhi anempikiswano futhi namhlanje, kwa-Absolut Viajes, sihlose ukuhlangana naye. Ihlaya laseNdiya? Ngempela? Yebo, manje sekuyisikhathi sokushiya ama-manga namanye amahlaya ase-Asia nawaseNtshonalanga okwesikhashana ukuze wazi amahlaya Yenziwe eNdiya.
1 Amahlaya eNdiya
2 USavita Bhabhi, amahlaya ezocansi
3 I-Adventures kaSavita Bhabhi
Ake sithathe izingxenye, kusho uJack the Ripper. Ngakho-ke, ake siqale ngokwazi umhlaba wamahlaya kancane kuleli lizwe elikhulu futhi elikhulu. Amahlaya amaNdiya ahamba ngegama lika i-chitrakatha. leli gama lifaka izincwadi zamahlaya kanye namanoveli emifanekiso amele isiko lezwe, bese-ke, akhishwa ngezilimi eziningana ezikhulunywa lapha.
Masikhumbule ukuthi iNdiya inenkolo ecebile kakhulu nezinganekwane, ngakho-ke izwe linomkhuba omude wabafundi wezincwadi, amanoveli wokuqhafaza namahlaya kusukela ebuntwaneni bokuqala. Noma kunjalo, imboni yamahlaya iqala ngama-60s, kepha kuphela emndenini nasezinganeni zomphakathi. Igatsha labantu abadala lohlobo lo kamuva lavela lapha, kepha ekugcineni laphumelela.
Ezingeni lezomnotho, Amahlaya amaNdiya aphumelela kakhulu ngeminyaka yawo-80 nasekuqaleni kweminyaka eyishumi elandelayo, iminyaka lapho abanyathelisi bengazange bayinikeze enkulu. Vele, izinombolo ezifanayo zokuphrinta nezokuthengisa sehlile kusukela lapho, njengakuwo wonke umhlaba, nangokwengxenye yezingane ayikwazanga ukuncintisana neziteshi zethelevishini noma imboni yemidlalo yamavidiyo.
Kunoma ikuphi, unyaka nonyaka kunezehlakalo ezithile eziqinisa umhlaba wamahlaya amaNdiya, njenge IComic Con India, i-Comics Fest India, i-Indie Comix Fest noma i-New Delhi World Book Fair. Futhi kuyiqiniso ukuthi abadali bamahlaya abaningi baseNdiya baqale ukufudukela eNtshonalanga basebenzela kancane iDark House, DC, Archies noma i-Image.
USavita Bhabhi, amahlaya ezocansi
Ukwazi okuncane ngomhlaba wamahlaya amaNdiya, manje ake siqhubekele kulokhu Amahlaya adumile futhi anempikiswano. Kungani kunempikiswano? Ukuthi iyi- amahlaya ezocansi futhi ucansi eNdiya luyinkinga impela.
USavita igama le ukuhola kwabesifazane, a umfazi wekhaya ngokuziphatha okuxekethile ngokwesiko lamaNdiya. Elinye igama, bhabhi, kusho uskwiza futhi yigama elinenhlonipho elisetshenziswe enyakatho yezwe ukubhekisa kwabesifazane basemakhaya.
Amahlaya yavela okokuqala ngo-2008, ngo-Mashi, futhi kwaba nempikiswano ngokushesha ngoba umphakathi wamaNdiya ugcina kakhulu. Abaningi bathi amahlaya abonisa uphiko olukhululekile lomphakathi, kepha sesivele sazi ukuthi lelo phiko lincane.
Kodwa ingabe izithombe zobulili ezingcolile azikho emthethweni eNdiya? Yebo, ukukhiqizwa kwezithombe zocansi akukho emthethweni, ngakho kwasekuqaleni iwebhusayithi lapho ikhomikhi yashicilelwa khona yahlolwa nguhulumeni ojwayela umthetho wamanje. Kepha ngaso leso sikhathi kwakukhona izimangalo zenkululeko bese kuthi izintatheli eziningi zihlanganyele ukugxeka isenzo sikahulumeni, simbiza ngokuthi asihambisani kahle futhi siyinzalamizi. Ngakho-ke, amanzi anyakaziswa ngokwanele ukuthi amahlaya awazange abhujiswe.
Ekuqaleni i abadali bamahlaya nesayithi lapho lashicilelwa khona kwagcinwa ku ukungaziwa, ngaphansi kwegama elijwayelekile le-Porn Empire, kepha ngemuva konyaka, ku-2009, I-Puneet Agarwak, umakhi wale ndawo kanye namaNdiya esizukulwane sesibili ahlala e-UK, uveze ubunikazi bakhe ukuze aqhubeke nokulwa nokuvinjelwa. Kepha umndeni ubungajabuli futhi emasontweni ambalwa kamuva umemezele yehlela kumakhomikhi.
Akuhlalanga isikhathi eside kepha kwaba yimpumelelo, kwabe sekuqala ukuvela kwezinye izilimi. Okungukuthi, ngo-2011 kwaba khona ihlaya, ngonyaka we-2013 ibhayisikobho futhi ngo-2020 a dlala, konke kukhuthazwe umlingiswa we-sexy womama wekhaya waseNdiya.
I-Adventures kaSavita Bhabhi
Ifomula ilula futhi njengoba iphumelela njalo uma kukhulunywa ngokukhulisa izinga lokushisa kwamadoda: USavita ungowesifazane osemusha futhi omuhle, othanda izinto eziningi futhi oshadile. Ukwazi okuncane ngamasiko amaNdiya, siyazi ukuthi ushadile ngoba izinwele zakhe zifakwe obomvu ngokujulile, futhi ufaka icici legolide elilingana neNdiya nendandatho yomshado.
USavita futhi uvame ukugqoka isari yendabuko nefindo elibomvu phakathi kwamashiya akhe, i- bindi. Umyeni akekho ekhaya, ukuze ubalekele isizungu, isithukuthezi nokunganeliseki ngokocansi USavita unobungani kakhulu nawo wonke umuntu odlulayo. Futhi ngobungane sithi ulala nabo bonke. Akukho lutho olungamathebhu noma olunesono noma olungavunyelwe. Kukhona ngisho nokulala nesihlobo okuthile okungasembula eNtshonalanga ...
Amahlaya ayiqiniso isaga lezinhlelo zocansi ezingavunyelwe futhi ngenxa yalesi sizathu kwaba yigalelo kulondolozo lomphakathi waseNdiya. Ngokwengeziwe, iqiniso lokuthi amahlaya ahunyushelwe ezilimini eziyisishiyagalolunye ezidume kakhulu eNdiya kube nomthelela empumelelweni yalo. Impumelelo ebonakaliswe ku Ababhalisile abayizinkulungwane ezingama-30 ukuthi yazi ukuthi inesikhathi sayo sobudala.
Impumelelo kaSavita Bhabhi nayo kuye kwasusa izingxoxo eziphikisayo phakathi kwezazi zezenhlalo. Phela kuthiwa nanamuhla u-70% wabantu baseNdiya usengowesiko kakhulu. Kepha, ukwahlulela kusuka kumakhomikhi, umkhuba awenzi indela nokuthi ugqoke isaree futhi ubukeke kungokwesiko akusho ukuthi awukwazi ukuhola impilo yobulili ekhuthele noma ngandlela thile ngamazinga akho amasiko.
Futhi yilokho uSavita Bhabhi akubonisa kahle kakhulu, kwenzekani endlini futhi cha uthele la gallerie. Sonke siyazi ukuthi izinto zenzeka endlini, kepha akekho okhuluma ngakho ... noma okungenani bekungekho ukukhuluma okuningi eNdiya kuze kufike lo comic.
Kodwa ingabe izinto sezishintshile eNdiya? Cha, kubonakala sengathi amaNdiya awakalulungeli ushintsho lwezocansi. Kunoma ikuphi, ingxoxo ephakanyisiwe ihlala ihle futhi ivumela izizukulwane ezincane ukuthi zixoxe okungenani ngempilo yazo yezocansi ngaphandle kwama-taboos.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » USavita Bhabhi: I-Comic Strip Ethandwa Kakhulu NaseNdiya
Idrarhma, imali yaseGrisi ngaphambi kwe-euro